YEYINTNGE(CANADA): Monday, September 20
20 September 2010 ဒိုင်ယာရီ
20 September 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/20/20100အကြံပြုခြင်း
ယ္ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၊ (၇) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ပြန်ပြောင်းငဲ့စောင်းကြည့်လျှင် အလှည့်အပြောင်း အချိုးအကွေ့များ၊ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုများသာ ဒင်းကြမ်းပြည့်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပေမည်။
မြန်မာပြည်သည် ဗြိတိသျှနှင့် ဆက်ဆစ်ဂျပန်တို့၏ အဓိက စစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာဒုက္ခသည် သုံးသိန်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၄၅၊ ဇူလိုင်တွင် ဗြိတိန်သည် မြန်မာပြည်သို့ ဂျပန်လက်မှ ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ တွင် တော်လှန်ရေးနှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ဆန်း ဦးဆောင်၍ ဗမာ့တပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကနဦးတွင် ဂျပန်တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၄၃ တွင် စစ်မှန်သည့် လွတ်လပ်ရေးပေးရန် ကတိပျက်ခဲ့သော ဂျပန်တို့နှင့် လမ်းခွဲကာ မဟာမိတ်တပ်များနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စစ်ဖက်အုပ် ချုပ်ရေးမှ အရပ်ဖက်နိုင်ငံရေးသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ကလီမဲန့်အက်တလီ နှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှအစိုးရက အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာပြည်ကို ပူးတွဲအုပ်ချုပ်လာခဲ့ ခြင်းမှ မြန်မာပြည်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ကာ အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အချိန်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲများကို ၁၉၄၇ တွင် မြန်မာပြည်၌ ကျင်းပခဲ့ သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လွတ် မြောက်ရေးပါတီ (AFPFL) သည် အမတ်နေရာ (၂၁၀) အနက် (၁၇၆) နေရာ ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၎င်း၏ ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီး ခြောက်ဦးမှာ ဂဠုန်ဦးစောနှင့် အပေါင်းပါများ၏ လုပ်ကြံမှုကို ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းလုပ်ကြံမှုကို ပူးပေါင်းကြံစည်သူများတွင် ဗြိတိသျှစစ်အရာရှိအချို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ကာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဂဠုန်ဦးစောကို ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် (AFPFL) ၏ ဦးဆောင်မှု အပိုင်းမှာ ဦးနုထံသို့ လွှဲပြောင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၈၊ ဇန်န၀ါရီ လ (၄) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ဦးနုသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အထက်လွှတ်တော်နှင့် အောက်လွှတ်တော် ဟူသော လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပါဝင်သည့် ပါလီမန်ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ သည်။ ၁၉၅၂-၅၃၊ ၁၉၅၆ နှင့် ၁၉၆၀ တို့တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ပြီး (AFPFL) ကသာ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
၁၉၆၁ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများထဲမှ အဆိုပါရာထူးကို ရရှိသော ပထမဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် လွတ် လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း တတိယအကြိမ်မြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အလွန် နှစ်နှစ်မျှအကြာ ၁၉၆၂ တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဦးနု အစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့သည်။
ဦးနေ၀င်းသည် တိုင်းပြည်ကို တစ်ပါတီစနစ်ဖြင့် ၁၉၈၈ အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းကာလကို အိုင်ဒီအိုလိုဂျီအရ “မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆီသို့သွားခြင်း” ဟု ဦးနေ၀င်းက ၀ိဂြိုလ်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကာလအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများကို နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ကာ စက်မှု လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူပိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အထီးကျန်နိုင်ငံအဖြစ်သုိ့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များ၏ ဆန္ဒပြမှုအတွင်း (၁၅) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ တို့ တွင် အလားတူ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှု အားလုံး ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၄ ၌ ဦးသန့်၏ ဈာပနတွင် အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဦးသန့်အရေးအခင်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အရေးအခင်းကို စစ်တပ်မှ အင်အားသုံးကာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
၁၉၈၈၊ သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုနှင့် မတရားဖိနှိပ်မှုတို့ကို ဆန့်ကျင်ကာ တစ်နိုင်လုံး အတိုင်းအတာအထိ ဆန္ဒပြခဲ့ ကြသော ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ထိုအရေးတော်ပုံ ကြီးအတွင်း ကျောင်းသားများနှင့် ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ၊ ပြည်သူများ နိုင်ငံအနှံ့တွင် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအမှန်နှင့် မကျေနပ်ချက်များကို ဖော် ထုတ်ပြသခဲ့သော ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းမှာ ရက်စက်စွာ နှိမ်နင်းခံခဲ့ရပြီး အနိဌာရုံများဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် လူ ထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသော်လည်း လူ (၃၅၀) မျှသာ သေဆုံး ခဲ့သည်ဟု အစိုးရက ကြေငြာခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ဦးဆောင်သော စစ်အုပ်စု အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောင်တွင် (ယခုတိုင် အုပ်ချုပ်နေဆဲဖြစ်သော) နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ်တွင် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပါတီစုံ ဒီမို ကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပြီး အမတ်နေရာ (၄၉၈) နေရာအနက် (၃၉၂) နေရာ ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရက အာဏာလွှဲ ပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ တွင် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက် များဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိစစ်အာဏာ ရှင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက အစိုးရ အကြီးအကဲနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၁ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်း ရုတ်တရက် ကြီးမြင့်လာမှုကို အကြောင်းပြုကာ ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အစဦးဖြိုခွင်းခံရမှုနောက် ပိုင်းတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များ ဦးဆောင်သည့် ချီတက်ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူများစွာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ခေါင်းဆောင် (၁၄) ဦးမှာ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြား သော အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် (၆၅) နှစ်စီ ချမှတ်ခံခဲ့ရ သည်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအလွန်
စစ်အစိုးရအား ဆယ်စုနှစ်များစွာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကာလကြာမြင့်စွာ ဖြစ်ပွားလဲာ့သော စစ်အစိုးရနှင့် ဟန်တရုတ်လူမျိုးများ၊ ၀၊ ကချင် လူမျိုးတို့ အကြား ပဋိပက္ခများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၀၈၊ မေလတွင် မြန်မာပြည်၏ အဓိက ဆန်စပါးထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် အကြီးအကျယ် ခံခဲ့ရပြီး လူ (၂၀၀,၀၀၀) ခန့် သေကြေပျက်စီးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတကာ နှင့် အဆက်ဖြတ် အထီးကျန်ဝါဒ ကျင့်သုံးကာ အဂတိလိုက်စားမှုများ ကျူးလွန်ပြီး အလွန်ခေါင်းမာလှသည့် စစ်အစိုးရသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ အကူ အညီများကို အချိန်အတန်ကြာ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက် မုန်တိုင်းဒဏ် သင့် ပြည်သူများ အလွန်အမင်း ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်။ အစားအစာ၊ အ၀တ်အထည်၊ ဆေးဝါးနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင် လာသော ကုလသမဂ္ဂ လေယာဉ်များမှာ အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် များစွာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တောသည် အင်းလျားကန်ကို ဖြတ်ကူးကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့် စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်သည်ဟု စွဲချက်တင်ကာ အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းကို (၁၈) လ ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မပါဝင်နိုင်အောင် စီစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အတိုက်အခံများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ အဓိက တရားခံ ဂျွန်ယက်တော မှာမူ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ပြည်နှင်ဒဏ်အပေးခံရကာ လွတ်မြောက်သွား ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရအပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပကာ အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ဖြင့် ရွေး ကောက်တင်မြှောက်မည့် ပါလီမန်တွင် စစ်တပ်က အမတ်နေရာ လေးပုံတစ်ပုံကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရထုတ်ပြန် ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့် မရအောင် တားမြစ်ထားခြင်းကြောင့် အဲန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မည်ဟု သိရသည်။
Ref: New Statesman (UK): " Burma:abrief history " by Caroline Crampton
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ
ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း စစ်တပ်က အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု အကြာတွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လျက်ရှိသည်။ သို့နှင့်တိုင် စစ်အစိုးရ မိမိဘာသာ ရေးဆွဲထားသော လမ်းပြမြေပုံအရ ကျင်းပမည့် ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချန်ထားခဲ့ရန် စစ်အုပ်စုကို အခွင့်အရေးရစေမည်မှာ မလွဲပေ။
မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိအနေအထားမှာ အဆိုးကျော့စက်ဝန်းထဲမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဆဲရှိနေရာ လမ်းပြမြေပုံမှာ တိုင်းပြည်ကို လမ်းမပြနိုင် ဖြစ်နေ သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းတစ်ခု ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ၂၀၀၈၊ ဖေဖော်ဝါရီလ က ကြေငြာခဲ့သည်။ ယင်းနောက် သုံးလအကြာ ဆိုးရွာပြင်းထန်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီးစမှာပင် အာဏာပိုင်များက လူထုအား အင်အားသုံး ခြယ်လှယ် လွှမ်းမိုးကာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပပြီး ထောက်ခံမဲ ၉၀ ရာ ခိုင်းနှုန်းကျော်ဖြင့် အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရွေးကောက်ပွဲအကြို လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် စစ်အစိုးရသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ဝီလျံယက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ ရေကူးဝင်ရောက် ခဲ့သည့်ကိစ္စကို အကြောင်းပြု၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ကာ အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း (၁၄) နှစ်နီးပါးမျှ အကျယ် ချုပ်ကျခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကျယ်ချုပ်သက် တမ်း (၁၈) လ ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခွင့် မရအောင် ကြိုတင်အကွက်ချ စီစဉ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာ တရားမ၀င်တော့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ အဲန်အယ်လ်ဒီက ယခုနှစ်ရွေး ကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဆိုခဲ့ပါ အနေအထားများအရ မြန်မာပြည်၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ၏ ကံကြမ္မာမှာ ဆက်စပ် နေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty International) က ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိ ကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်က လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်နှင့်မတူ ကွဲပြားသော အဓိက စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကို ပြညွှန်နေသည်။ ယင်းမှာ စစ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအား ၎င်း၏နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်စေရန် သဘောတူညီမှု ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဦးဆောင်မှုအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်စေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရများသည် တိုင်းရင်း သား လူနည်းစုများအပေါ် ချော့တစ်ခါ၊ ခြောက်တစ်လှည့် မူကို ကိုင်စွဲ ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် ခြောက်ခုကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီတွင် စစ်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး အဖွဲ့များအား ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်လာစေရန် အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်သတိပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။
သို့သော် အချို့အဖွဲ့များအနေဖြင့် ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြစ်နေဆဲပင်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေဆဲဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအား အပြီးတိုင် ချေမှုန်းရန် သို့မဟုတ် အဆိုပါအဖွဲ့များနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်မှာ စစ်အစိုးရအတွက် ခေါင်းခဲနေရဆဲ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်တပ်နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ တိုက်ပွဲဝင်ဆဲ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအား ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီး ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကိုးကန့် ဒေသများတွင် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို စစ်တပ်နှင့် ယင်း၏ အပေါင်းပါများက မတရားသတ်ဖြတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဆိုခဲ့ပါ ဒေသများမှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား (၄၅,၀၀၀) ကျော်မှာ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ချေမှုန်းခံခဲ့ရ သည်။
ကိုးကန့်အဖွဲ့အား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ တည်ရှိဆဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား စစ်တပ်လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဗျူဟာ သစ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထက် ၀က်ကျော်က သဘောတူ လက်ခံထားသော စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက် များနှင့် အခွင့်အရေးများကို ကိုးကန့်နှင့်အခြားအုပ်စုအချို့က ငြင်းပယ်ထား သည်။ မြန်မာပြည်၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများအနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့များ၊ အကြမ်းမဖက်သော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင် မည်မျှ ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ခွင့်ရမည်ကို ရွေးကောက်ပွဲက ရှင်းလင်းစွာ သိစေမှာ ဖြစ် သည်။
တကယ်တမ်းတွင် အေအိုင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင် ခံစာက “အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်သည်” ဟူသော ကျိုးကြောင်း မဆီလျော်သော နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အယူအဆအမှားကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ပြီးခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အေအိုင်၏ သုတေသနပြုချက်က ဖော်ပြ နေသည်မှာ တိုင်းရင်းသား အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများနှင့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်များ၏ စနစ်တကျ ဖိနှိပ်မှုကို ခံလာခဲ့ရ သည်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဖိနှိပ်သည့် သဘောဖြင့် အဆိုပါ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အ ရေး ချိုးဖောက်မှုများတွင် အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးမှု၊ မတရားနည်းလမ်းဖြင့် တရားစီရင်မှု၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှု၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၊ ဥပဒေမဲ့ စီရင် ကွပ်မျက်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် ယင်းအစစ်အမှန်တရားကို သဘောပေါက်နားလည်ကာ လက် တွေ့အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။
ပြည်ပရှိ မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူများက “အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း” ဆိုသည့် စကားရပ်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် သည့် အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအဖြစ် သာ ရှုမြင်ကြသည်။ ဤအမြင်မှာ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပစ်ပယ်ရာရောက်ပြီး အစိုးရကို အတုစိန်ခေါ်သည့် အတွက် ၎င်းတို့ပေးရသည့် အဖိုးအခကိုလည်း လျစ်လျူရှုရာကျသည်။
ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းအရ အယ်န်အယ်လ်ဒီ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဦးဆောင်မှုနှင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒုတိယအောင်မြင်မှု အရှိဆုံးပါတီမှာ အဲန်အယ်လ်ဒီနှင့် တူညီသော ရည်မှန်းချက်များရှိသည့် ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (Shan NLD) ဆိုသည့်အချက်ကို မကြာခဏဆိုသလို မေ့လျော့နေကြသည်။
ထိုနည်းတူ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူများမှာ ရခိုင်ရဟန်းတော်များဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းနှင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသများနှင့် မြို့ကြီးများမှာကဲ့သို့ပင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် များတွင်လည်း အင်အားပြည့် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
အေအိုင်အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာသည် မြန်မာ့အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး မှာ ပထ၀ီအနေအထားနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများအထိ ကျယ်ပြန့်စွာ ပျံ့နှံ့တည်ရှိမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ အေအိုင်၏ အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂,၂၀၀) ကျော်အနက် ၁၀%မှာ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့် အမျှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို လွှတ်ပေး ရုံဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ၊ မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားနိုင် ငံရေးအတိုက်အခံများအား ဖိနှိပ်နေမှုကိုလည်း ရပ်တန်းက ရပ်ရမည် ဖြစ် သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလတွင် ယင်းကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုး ဖောက်မှုများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်မခံဘဲ၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုရုံးစည်းဝေးခွင့်တို့အပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတို့ကို လည်း ချက်ချင်းလက်ငင်း အရေးတယူ ပြုရေးမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ငါးလခန့်က စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ အချက်များမှာ လူ့အခွင့်အ ရေး စည်းမျဉ်းများ၊ စံနှုန်းများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ထားရုံ သာမကဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုရုံး စည်းဝေးခွင့်နှင့် အသင်းအဖွဲ့တည်ထောင်မှုတို့ကို တားမြစ်ကန့်သတ်ထား သည်။ ဤအခွင့်အရေးများကို လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းတွင် တရားဝင် ပြဌာန်းထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲများကို အဆိုပါ အခွင့်အရေးများဖြင့် အကာအကွယ်ပေးရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်။
လူ့အခွင့်အရေး အမြင်ရှုထောင့်အရ အလွန်ဆိုးရွားသည့်အ ချက်မှာ သမ္မတအနေဖြင့် ဥပဒေအထက်တွင် ရှိနေခြင်းပင်။ အစိုးရ အရာရှိများအား အတိတ်က ရာဇ၀တ်မှုများမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးထားပြီး မည်သည့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်မဆို လူထု၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများ ကို ထိပါးခံရမည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအကျဆုံး သုံးသပ်ရလျှင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုလုံးကို တရားမျှတမှုကင်းစွာ ဘေးဖယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းနေသူများ၊ ဒေ၀ါလီ ခံရသူများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ တားမြစ်ခံထားရသူများမှာ မဲပေးခွင့် မရှိပေ။ “မည်သူသည် စိတ်မူမမှန်သူဖြစ်သည်၊ မည်သူသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ တားမြစ်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်” ဟု ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည့် ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သစ်တစ်ရပ် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒေ၀ါလီ ခံရသူများကိစ္စတွင် စီးပွားရေးနှင့် ငွေကြေးအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရန် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု မဖြစ်သင့်ပေ။
စိုးရိမ်ဖွယ် အကောင်းဆုံးမှာ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူများ မဲပေး ခွင့်မရှိသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၂၀၀ ကျော်မှာ မဲပေးခွင့် မရှိတော့ပေ။ ၎င်းတို့အထဲမှာ အများစုမှာ မည်သည့် ရာဇ၀တ်မှုမှ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားရင်း မတရား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူများသာ ဖြစ်သည်။
ဤအချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှ ဖယ် ထုတ်ထားရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အရေအတွက် လေးသိန်းမျှရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များကိုလည်း မဲပေးခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ ဆိုခဲ့ပါအချက်များမှာ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျားကန်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများမှာ ခွဲခြားဖိနှိပ်သော၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခွင့် ကို တားမြစ်ထားသော၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စည်းဝေးစုရုံးခြင်းကို ချုပ်ခြယ်ထားသော သံတူကြောင်းကွဲ အချက်အလက်များဟုသာ ဆိုရပေမည်။
Ref: Open Democracy: Myanmar’s 2010 elections :ahuman rights perspective_Benjamin Zawacki, 30 Jul 2010
(Photo: Burma Campaign UK)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အာရှ လစ်ဘရယ်နှင့် ဒီမိုကရက် ကောင်စီ (CALD) ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆုအပ်နှင်းပွဲကို ဗြိတိန် နိုင်ငံ၊ လီဗာပူးလ်မြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က ကျင်းပစဉ် မဇိုယာဖန်း (ယာမှ တတိယ) က ကိုယ်စား လက်ခံနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: Burma Campaign UK)
ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကိုတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လီဗာပူလ်မြို့မှာ ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး ဆုကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Burma Campaign UK အဖွဲ့က မဇိုရာဖန်းကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စား လက်ခံမယ်လို့ CALD အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဇိုရာဖန်းက ပြောဆိုရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စား ဆုရယူရတဲ့အတွက် သူအနေနဲ့ ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ပထမတချက်ပေါ့နော်၊ ကျွန်မကတော့ ဒီ ကျွန်မတို့ရဲ့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်အတွက်ပေါ့နော်၊ ကျွန်မတို့ ဒီလိုမျိုး သွားယူပေးရတယ် အင်မတန်ကို ကျွန်မ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းတာ တခုကတော့ သူက ကိုယ်တိုင် လာပြီးတော့ မယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်၊ သူက နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှာပဲ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ အဲဒါ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အဲဒီအခမ်းအနားကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီအဖွဲ့ (NCUB) အဖွဲ့ကိုယ်စား ဦးညိုအုန်းမြင့်လည်း တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါအပြင် အဲဒီအခမ်းအနားကို ဗြိတိန်နိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အာရှတိုက်က CALD အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုချီးမြင့်တဲ့ CALD အဖွဲ့ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ အာရှတိုက်က လက်ဘရယ်နဲ့ ဒီမိုကရက် ပါတီတွေက စုပေါင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီယား ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ နိုင်ငံတွေက အဲဒီ ပါတီတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။
ဒီအကြောင်း RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးခင်မောင်စိုးမင်းက အသေးစိတ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအကြား တရုတ် မည်သို့ရပ်တည်မည်နည်း
Monday, 20 September 2010 23:48 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
တရုတ်နှင့်မြန်မာနအဖတို့ နှစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးပိုမို ကောင်းမွန်လာသည်နှင့် အမျှ တရုတ်နယ်စပ်အခြေဆိုက် အပစ်ရပ် အဖွဲ့များနှင့်မြန်မာနအဖတို့ ဆက်ဆံရေးမှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ယိုယွင်းလာသည် ။ ယခုလဆန်းပိုင်းက နအဖ အကြီး အကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ တရုတ်ပြည်မှအပြန် ပြည်တွင်းအတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် အပစ်ရပ်လက်နက်ကိုင် များကို နှိပ်ကွပ်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာသည်။
ထို့ကြောင့်တရုတ်နိူင်ငံ၏ မြန်မာနိူင်ငံအပေါ်ထားရှိသည့် မူဝါဒနှင့် အတိုက်အခံများအား နှိပ်ကွပ်နေသည့် နအဖ၏ အစီ အစဉ် အပေါ် တရုတ်၏ ရပ်တည်ချက်တို့ကို တရုတ်- မြန်မာနအဖတို့ ဆက်ဆံရေး အနီးကပ်လေ့လာနေသူ တရုတ် နယ်စပ်မှ စစ်ရေး/နိုင်ငံရေးအကဲခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇောကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါသည်။
တရုတ်အတွက် မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်သလဲ?
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ရေတပ်ကြီး တစ်ခုတည် ဆောက်ဖို့ လိုအပ်လာတယ် အဲဒီအောက်မှာ လက်ရှိ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထွက် ပေါက်တစ်ခုထဲနဲ့ မလုံလောက် တော့ ဘူး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်မှာလည်းလိုလာတယ်။
အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ဂျပန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအောက်မှာ သူ့အတွက် ပင်လယ်ပြာရေတပ်မတော် ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတယ် ပင်လယ်၂ ခုမှာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့လိုလာတယ် အဲဒီအောက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က ပိုအရေးကြီးလာတယ် သူ့ရဲ့အနောက်တံခါးဝလုံခြုံရေး သေနင်္ဂဗျူဟာ တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပဲနဲ့ သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဗမာပြည်ဟာ အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်မကတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေတယ် ဒါကြောင့် မို့ နအဖနဲ့ပိုမိုပြီးတော့ လေးနက်တဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။
ဦးအောင်ကျော်ဇော (ဓါတ်ပုံ - MG/SHAN)
မြန်မာပြည်အပေါ်ထားတဲ့ တရုတ်ရဲ့လက်ရှိ ပေါ်လစီကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ၊
တရုတ်ရဲ့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ အဓိကပေါ်လစီက အကြမ်းမျဉ်းပြောရရင် ရေတို အခွင့်အရေးပေါ်က ဆက်ဆံမှုပေါ့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေမှာ ရေတိုကိစ္စတွေများတယ် အများစုက ရေနံနဲ့ ဓါတ်သတ္တုတူး ဖေါ်ရေးတွေပဲ လက်ရှိ ဒေါ်လာ သိန်းဘီလျှံကျော်ရှိတယ် ဗမာပြည်မှာစက်ရုံကြီးတွေဆောက်တာတို့ အလုပ်သမားတွေ အကျိုးရှိအောင်လုပ်တာ မရှိဘူး ဗမာလိုပြောရင်တော့ အပေါ်ဆီ ခပ်ယူတဲ့ သဘောပဲ။
တရုတ်နဲ့နအဖရဲ့ အတွင်းကျကျဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုလဲ?
အပေါ်ယံတရုတ်နဲ့ဗမာဆက်ဆံရေးက အင်မတန်ကောင်းတယ် ဗမာအစိုးရအခက်အခဲဆုံးအချိန်မှာ တရုတ်ကကျားကန် ပေးထားတာ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ တရုတ်ရဲ့ဗွီဒိုအာဏာနဲ့ အသက်ကယ်တာ တရုတ်က စီးပွားရေး လူမှုရေး စစ်ရေးအကူအညီတွေပေးထားတာ ဒီလိုအကူအညီတွေရနေတဲ့ အတွက်လည်း နအဖဘက်က အနောက်နိုင်ငံတို့ အမေရိကန်တို့နဲ့ ကစားလို့ရနေတယ် ဒီလိုပံ့ပိုးကူညီမှုအောက်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်မြဲနိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးဟာ အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပေါင်းစည်းနေတာ ဖြစ်တယ်။
မလွဲသာမရှောင်သာတဲ့ အခြေအနေမှာ နအဖက တရုတ်ကိုမှီခိုရပေမဲ့ တစ်ဘက်မှာ တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ မကျေ လည်တာတွေအများကြီးရှိတယ် ဗိုလ်သန်းရွေတို့ ဗိုလ်မောင်အေးတို့ သမိုင်းဟာ ဗကပနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ် ယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ၀တို့ မုံးလားအဖွဲ့တွေဆိုတာလည်း ကွန်မြူပါတီရဲ့ လက်ကျန် အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒီမီးမွေးခဲ့တာ တရုတ်ပြည်ကြောင့်ဆိုပြီး နအဖစစ်တပ်ထဲမှာ အဲလိုထင်မြင်တာတွေရှိတယ် တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေသော်ငြားလည်း ဗမာ တပ်က တရုတ်ကိုမကြိုက်ကြဘူး ဗိုလ်သန်းရွေတို့ ဗိုလ်မောင်အေးတို့ အပါပေါ့။
နှစ်ဘက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ဘယ်ဘက်က အမြတ်ထွက်သလဲ?
တရုတ်ဘက်ကတော့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ တရုတ်ပြည်သူများက အကျိုးခံစားရတယ် ဗမာပြည်အတွက်ကတော့ လက်တစ် ဆုပ်စာသော စစ်ဗိုလ်များနဲ့သူတို့မိသားစုအတွက်ပဲ ဖြစ်တယ် တရုတ်ပြည်ရဲ့ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေမှာ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သားသမီးကို ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နူန်းပေးမှ ရင်းနှီးမြုတ်နှံခွင့်ရှိတာ ဖြစ်တယ် အဲတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဟာ ဗမာပြည်သူ တွေ အကျိုးမခံစားရတဲ့အပြင် နောင်၁၀နှစ် ၊ နှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ သဘာဝဘေးအန္တရယ်မျိုးစုံကို ဗမာပြည်သူတွေ ခံစားရ လိမ့်မယ် တရုတ်ဘက်ကတော့ ရေရှည်မှာ နိူင်ငံရေး အရူံးပေါ်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ တရုတ်ပြည်သွားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျ?
ဗိုလ်သန်းရွေသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ယေဘူယျပြောရရင် ၃/၄ ချက်လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။
ဗိုလ်သန်းရွေက သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တွေ နောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေ နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရအပေါ် တရုတ်နိူင်ငံရဲ့ ထားသင့်တဲ့ သဘောထားတွေကို တောင်းဆိုတဲ့သဘောပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဒီလောက်အသက်ကြီးနေတဲ့ နံပတ် ၁ နဲ့၂က ရာထူးဖယ်မပေးပဲနဲ့ သူနဲ့တန်းတူရည်တူလုပ်နေတဲ့သူ အား လုံးကိုဖြုတ်ပစ်ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ထိုင် နေတဲ့ကိစ္စက ဗိုလ်သန်းရွေ လုပ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်း အတိုင်းချီ တက် နေတယ်ဆိုတာတစ်ခုလုံးရဲ့ဇတ်ဆရာဟာ သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ အာဏာကို သူချုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြတာ ဖြစ်တယ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်း မစိုးရိမ်ဖို့သွားပြောတာပါ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေ လုပ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ဗိုလ်သန်းရွေ သွားတာ ဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ဗိုလ်သန်းရွေတို့အုပ်စုနာနာကျင်ကျင် ခံစားနေရတာရှိတယ် တစ်ပြည်လုံးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ချင် သလိုလုပ်လို့ ရနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တယ် လူဦးရည် သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ ရန်ကုန်ကိုလည်းသူထိန်းထားနိူင်တယ် ဒါပေမဲ့ လက်နက်အချို့ရှိတဲ့ ၀တို့ လူမျိုးစုတွေကနေပြီးတော့ သူ့ရွေးကောက်ပွဲကို ပမာမခန့်လုပ်တယ်လို့ သူခံစားနေရတယ် အရှက်လည်းကွဲတယ် ဒါကို တရုတ်အစိုးရနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ပဲ ကူညီပံ့ပိုးမှု အောက်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ် ဒါကိုသူအခိုင် အမာသွားဆွေးနွေးတာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရချင်တာ ဒါကြောင့်သူသွားတာ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတရုတ်ပြည်က ပြန်လာပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဘာတွေထူးခြားလာတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဗိုလ်သန်းရွေ ပေ့ကျင်းကပြန်လာပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်စုတို့ NLD ကိုမတရားသင်းကြေငြာတာတို့ သတင်းစာမှာ တရုတ်က နအဖဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကို မထောက်ခံဘူး ဆိုတာတို့ကို လုပ်တဲ့ကိစ္စ ဆိုရင် တစ်ချိန်က တရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေ ဟောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ၀ တို့မုံးလားတို့က တရုတ်အပေါ်မှာ မယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဆွေလို့ ထင်အောင် ဖန်တီးတာဖြစ်တယ် သူ့ဟာနဲ့သူ ထီးထီးကြီးလုပ်လို့ မရဘူး လူထုကလည်းခံမှာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့အားကို ယူပြီး လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ လူထုအများစုက တရုတ်ကြီး ညွန်ကြားချက်နဲ့လုပ်တာ လို့ထင်နေတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျ ဆင်းအောင် ဗမာ ပြည်သူတွေနဲ့ တရုတ်အစိုးရ တရုတ်ပြည်သူတွေကြားမှာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတမင်ဖျက်ဆီးတာ ဖြစ်တယ်။
တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ် တရုတ်ပြည်နဲ့ နအဖသဘောထား ဘာကွာသလဲခင်ဗျ?
တရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်းဆိုမှုမှာက နှစ်နိူင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရှိဖို့ကို ပြောတယ် ဗိုလ်သန်းရွေတို့ ပြန်ပြောတာက သူတို့ပြောတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်မခံပဲနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး မရှိနိုင်ဘူး ဒါကနအဖရဲ့သဘောထား ဗိုလ်ရဲမြင့်တုန်း ကလည်း ဒီလိုပဲပြောတယ် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ လက်နက်ချတာနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တာ ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ် သူတို့မှာ နိုင်ငံရေးအရစဉ်းစားချက် ဘာမှမရှိဘူး အမျိုးသားတန်းတူမှုတို့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ဆိုတာ မရှိဘူး ဒါက ဗိုလ်သန်းရွေရဲ့အခြေခံစဉ်းစားချက်ဖြစ်တယ် လုပ်လို့မရရင်ချမယ်ဆိုတဲ့ မူပဲ။ အထူးသဖြင့် တရုတ်သမ္မတ ကြီး ပြောတဲ့ စကားက ရှင်းပါတယ် ခင်ဗျားတို့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရဖို့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ဆောင်နေတာကို စာနာနားလည်ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့ ကျနော်တို့မြင်ချင် တာကတော့ နယ်စပ်ဒေသဟာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းပြီး အမျိုးသားတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒေသကြီးတစ်ခုအဖြစ် မြင်လိုပါတယ်လို့ တရုတ်ရဲ့ နှစ်ခွ ပေါ်လစီကို လှလှပပကြီးပြောသွားပါတယ်။
တရုတ်အတွက် နယ်စပ် တည်ငြိမ်ရေးဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ?
တရုတ်ဘက်ကတော့ မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးတည်ငြိမ်ရေး အရေးကြီးသလို နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးဟာလည်း အရေး ကြီးတယ်။ နယ်စပ်ဒေသထူးခြားချက်က နှစ်ဘက်ပြည်သူတွေဟာ တူညီတဲ့အမျိုးသားငယ်တွေဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ ဗမာပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်လာတဲ့ မတည် ငြိမ်မှုတွေဟာ တရုတ်ပြည်တွင်းကိုကူးစက်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေရဲ့မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်လာ မှာကို စိုးရိမ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ နအဖဖြစ်စေချင်သလို တရုတ်ဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဒီကနေ့ အခြေ အနေ အရဆိုရင် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ဖြစ်ရတော့မယ်။
မြန်မာပြည်အပေါ်ထားတဲ့ ပေ့ကျင်းဗဟိုနဲ့ ယူနန်အစိုးရတို့ မူဝါဒ ကွာခြားချက်ရှိပါသလား?
အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဘာမှမကွာခြားဘူး လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ယူနန်ပြည်နယ်က လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ ဗဟိုအစိုးရ မှာမတွေ့ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အစိုးရအမှုထမ်းတွေ လာဘ်စားတာတို့ စည်းကမ်းမရှိတာတဲ့ မပြည့်စုံတာတို့ နအဖလို လက်နက်ကိုင်ဗိုလ်ကျနေတဲ့ အစိုးရအောက်မှာ တရုတ်ပြည်အစိုးရနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲလက်မှတ်ထိုးထားထား မူဝါဒမကွာ သော်လည်း ယူနန်အစိုးရက ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ် ဗမာပြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ယူနန်အစိုးရက ပိုရင်ဆိုင်ရပြီး ပြင်းပြင်ထန်ထန်ပြောရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိလာတယ်။
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း / ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
နအဖဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ၉၇/၂၀၁၀ ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသဘောနဲ့ပြောရရင် ဒါဟာအင်မတန်အရေးပါတဲ့ လုပ်ရပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ န၀တ-နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် တလျှောက်လုံး ကြံစည်နေတာကို အပြတ်အကောင်အထည်ဖော်ချလိုက်တာလို့ ပြောရမှာပါ။ သာမန်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းကစပြီး လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု အများဆုံးရနေတယ်လို့ ဆိုရမယ့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတရပ်ကို အာဏာနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ တခုက နအဖဟာ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတာ အားလုံးက တွက်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ပါ။ နောက်တခုကတော့ ဒါဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အလဲထိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဒီအထဲက နည်းနာရှာပြီး ပြန်ရုန်းထလာမှာပဲလို့ လူထုတွေက မျှော်လင့်နေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဒီလောက်တောင် ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ နအဖကိုယ်စား သဘောတရားဆရာကြီး လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တာဟာ နိုင်ငံရေး သူငယ်နာမစင်တာလို့ ရေးသားနေတာကို တွေ့ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက အိမ်နီးနားချင်းက နိုင်ငံကြီးတွေကိုသွားပြီး မျက်နှာချိုသွေးနေတာနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မွေးထားခဲ့တဲ့ အီးလစ် (elite) ဆိုတဲ့ လူတွေကလည်း နအဖအတွက် ကမ္ဘာလှည့် ကြော်ငြာမောင်းခတ်နေကြပါတယ်။ ပညာတတ်ဖောက်ပြန်တော့ သူများထက်ကဲတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလူတွေဟာ “နအဖကိုဆန့်ကျင်နေမယ့်အစား ကျနော်တို့နဲ့ လာဆွေးနွေးလှည့်စမ်းပါ” ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးတွေလည်း လျှောက်ပြောနေကြပါတယ်။ အားနာစွာနဲ့ ပြောရရင် ဒီလိုပြောနည်းဟာ အင်တန်စော်ကားတာပါ။ နအဖဟာ ဘယ်သူနဲ့မှမဆွေးနွေးဘဲ အကြမ်းကိုင်နေတာကိုတော့ ဘာမှမပြောဘဲ နအဖက လိုက်ဖမ်း-လိုက်သတ်လို့ ရှောင်ထွက်လာရတဲ့လူတွေကို သူတို့က နားချပြမယ်လို့ ဆိုနေတာပါ။ သူတို့အပြောဟာ နအဖကို နာကြည်းစွာ ဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုမှ ဆွဲဆောင်လို့မရဘူးဆိုတာ သူတို့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲကပဲ သူတို့တတွေ ဒါမျိုးတွေ လျှောက်ပြောနေတာဟာ သူတို့ကို ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒိုနာတွေ (donor) နဲ့ နအဖကို သိစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလထဲမှာပဲ တိုက်ဆိုင်လို့ပဲလား၊ တမင်ပဲလားမသိ၊ ပဲခူးမြို့ထဲမှာ အရပ်သားလူငယ် (၂) ယောက်ကို စစ်သားတွေက တမင်တကာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီး တွေ့သမျှလူကို စိမ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးမှောင်တဲ့ညမှာ ငှက်ဆိုးထိုးသံ ကြားလိုက်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ နအဖက သူ့လူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ခါးပိုက်ဆောင်တပ်ကို ပြောင်ကာကွယ် ပြောဆိုသွားသလို နအဖရဲ့ ဒီမိုကရေစီအောက်က မီဒီယာများကလည်း ပြောင်ပဲနှုတ်ပိတ်၊ လက်ဆွံ့ နေပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နအဖလုပ်နေတာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်ထွက်လာမယ့်အစိုးရဟာ ပိုပျော့ပျောင်းမယ်၊ မတူတဲ့လူတွေနဲ့ အပေးအယူတွေ ပိုလုပ်လာမယ်လို့ ယူဆစရာရှိပါသလား။ နိုင်ငံရေးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တော့ တင်ခွင့်ပေးပါရဲ့။ သူတို့မကြိုက်တာကို မပြောရ၊ မရေးရ၊ မလုပ်ရဆိုလို့ကတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းရတာပဲဖြစ်မှာပါ။ အခု နအဖက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ လူတွေထဲက ဘယ်သူကများ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို စာနာသံ၊ နအဖကို မကျေနပ်သံတွေ ဖော်ပြရဲလို့လဲ။
ကြံ့ဖွတ်ပါတီ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခ
100919 Bty Bur Usdp
" ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးရင်သံဃာတွေကို သတ်ဦးမှာပဲ"
"၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲပေးရင်ကျောင်းသားတွေ ထောင်ကျဦးမှာပဲ"
ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို C...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအကြား တရုတ် မည်သို့ရပ်တည်မည...
ကြံ့ဖွတ်ပါတီ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ပြည်...